१८ वर्षीय पुष्पा लिम्बूको ज्या’न लिने प्रेमी सार्वजनिक ! – Online Khabar 24
१८ वर्षीय पुष्पा लिम्बूको ज्या’न लिने प्रेमी सार्वजनिक !
शुक्रबार मृ’त अवस्थामा भेटिएकी १८ वर्षीय पुष्पा लिम्बूको योजनाबद्ध रूपमा ह’ ‘त्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घ’टनाबारे भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुनियोजितरूपले ह’ ‘त्या भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको हो ।
ह’ ‘त्या आरोपमा फुङलिङ नगरपालिका–१० का ट्र्याक्टर चालक राम कार्कीलाई पक्रा’उ गरी भएको अनुसन्धानका क्रममा यो’जनाब’द्ध रूपले ह’ ‘त्या भएको पाइएको ताप्लेजुङ प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आइतबार पक्राउ परेका कार्कीले बयानका क्रममा पुष्पाको ह’ ‘त्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
“पक्राउ परेका कार्कीले आफूले ह’ ‘त्या गरेको स्वीकार गरेका छन्, प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनले दिएको बयानबाट योजनाबद्ध ढङ्गले ह’ ‘त्या भएको देखिन्छ”, प्रनाउ राणाले भन्नुभयो । आइतबार जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिएको राणाले बताउनुभएको छ ।
विगत नौ महिनादेखि प्रेम सम्बन्धसँगै शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध भएको तर विवाहको प्रस्ताव भने अस्वीकार गरेपछि वि’वा’द हुँदा आफूले ह’ ‘त्या गरेको कार्कीले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । वि’वादप’श्चात टा’उ’कोमा ढु’ङ्गा’ले प्र’हा’र गरेको र त्यसपछि वि’षा’दी खु’वा’ई भीरबाट ध’के’ले’र झा’रेको कार्कीले बयान दिएका छन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिका–३ भर भई सदरमुकाममा डे’ रा गरी बस्दै आएकी पुष्पा तबेबुङ (लिम्बू) भानुजन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिइन् । उनको शव फुङलिङ नगरपालिका–७ स्थित चा’रपा’टेदेखि फुङलिङ बजार आउने जाने गोरेटो बाटोभन्दा २५ फिटमुनि फेला परेको थियो । ताजा खबरबाट साभार
Prevएकपटक त कोसीमै लगेर प्लेन ……..
next७३ जनाको ज्यान बचाउने पाइलट शेर्पालाई किन लगाइयो बिमान उडाउंन प्रतिबन्ध ?